Izinzuzo ze-MCSE Certification Course | Microsoft Gurgaon | IYO
Izibonelelo zeCompse Certification Course
Ziziphi iiNzuzo zeCompse Certification Course?
Yiyiphi i-MCSE Certification Course?
Ngubani omele athabathe?
Iinzuzo zokufumana i-MCSE Certification Course
Unokuphanda amaxesha amaninzi
Uya Kufumana I-Skills Well-Run Skills
U khu seleko lwaBasebenzi
Iingcali ze-IT kufuneka zihlolisise ingqiqo kunye nokukwazi kwazo rhoqo emva kwexeshana njengoko ilizwe le-IT lihlala libonisa iimpawu zenguqu. Abantu abangenzi nto banokuhlala emva kokuhamba kwabo emsebenzini. Enye ikhono elinjalo eliza kukugcina kwisimo sokuvisisana nale hlabathi eliguquguqukayo eliguquguqukayo Izifundo ze-MCSE. Isatifikethi sizinzile ngokwakho njengenye yezinto ezifunekayo kakhulu kwiingcali ze-IT.
MCSE, IMicrosoft Engine Certified System, i-Certified Certified Certification System (IT certified). Ukunikezelwa ngu-Microsoft, oku Sekiso seMicrosoft kuyimfuneko enkulu enokusetyenziswa kwezixhobo zeenjini kunye neenjini. Yilungiselelo olubanzi lweemviwo ze-7 ezivavanya ukuqonda kwakho kwiimodyuli ezahlukeneyo, umzekelo, Exchange Server, System System (SCCM) Windows, SQL Server, Sharepoint, kunye neLync.
Ukulungiswa kwe-MCSE yeentlobo ezininzi zeengcali ze-IT ezifuna ukuthatha umgca phezu kwabanye kweli hlabathi elinenkohlakalo. Kwimeko nayiphi na imeko, kukho uhlobo oluthile lweeprofayili ezilahlekelwa ukuqikelela kwayo ngaphandle kwesiqinisekiso se-MCSE, kwaye ziyakuboniswa njenge:
I-Database Backup Administrators
Abalawuli beSQL Server
Ezi ngcali ziyakwandisa ixabiso kunye nenzuzo ngokufumana ngokuqhelekileyo izifundo ze-MCSE.
Omnye ufuna ukugxila ngelixa ekhetha iifa ukuze enze njengoko akusiyo yonke isiseko esinikwe ngokuqeqesha okuqhutywa bukhoma kunye nokufundiswa okunconywayo ukucinga ngezinto ezindizayo. Isiqinisekiso asiyinto esilula ukuba sidlule. Icela uphando olubanzi kunye nokusebenza ukucima zonke iimviwo ezixhenxe. Kule nto, kufuneka uxhomekeke kwiyona nto ibhetele. I-innovative Technology Solutions i-aseset enjalo yakha ifa layo njengendlela yokumisa phakathi kweendlela ezithembekileyo zokufumana inkqubo ye-MCSE.
Zonke izinto ezicatshangwayo, isatifikethi siza kuvula ihlabathi elitsha elinamathuba amaninzi kuwe. Umzekelo, ekuhambeni kokwenza i-MCSE: I-Infrastructure yomSeva Kwi-server 2012 R2 Training and Certification Courses, unokwandisa umgangatho womsebenzi kwaye unokusebenza ekufuphi kwamandla, ukulawulwa kweenkqubo, ubuchule, ukulawulwa kweendlela kunye nokulawulwa kobunzima ezingekho ngaphakathi zakho iindlela ngaphambili. Ngokufanayo, le khosi ikunika ukufikelela okuqhubekayo kwintsimi ye-computing yefu, i-cloud yangasese, i-Sharepoint kunye nemimandla eyahlukileyo kunye nesiko salo senziwe iziqinisekiso ze-MCSE.
Icandelo le-IT licela ngokukhethekileyo. Ekufuphi, ubuchule abucelayo bongeza ngaphezu kwebhodi. Akukho khosi elilodwa eligqwesileyo kunye nekhosi yezinga lokugqibela le-postgraduate. Omnye kufuneka ahambe uqeqesho loqeqesho kunye noqeqesho lwe-MCSE yindlela efanelekileyo kakhulu yokuzifeza. Kuya kukunceda uqhagamshelane nobuchwepheshe be-minute-to-minute kwi-limited capacity of focus.
Ukuxhaswa kwemali, ukuchithwa kweendleko kunye needemon ezahlukeneyo zikhoyo kwi-IT ishishini elenza ungathembeki ngomsebenzi. Icandelo le-IT alinikezeli ukuphosakela ukutshintsha iqela layo xa kwenzeka ukuba asebenzisanga okanye iinjongo zabo azihlaziyi ngokuhambelana nomgaqo oqhubekayo. Kule meko, umntu kufuneka abe nephulo elongezelelweyo lokukhula. Uqeqesho lwe-MCSE kunye nesatifikethi yinto yakho yodwa yokuthatha loo nto.
Kuthetha ukuba ubuchule obongezelelweyo buya kwandisa ubukhulu bezero kwikhekhe lakho. I-MCSE iqinisekisile ingcali ngokuqinisekileyo ingafumana i-$ 96,215 epheleleyo ngonyaka. Kuya kuqhubeka nokwandiswa ngamava akho.
Ukubamba isitifiketi se-MCSE yiyona nto ikhethekileyo yokuba nayiphi na i-IT ingcali eyayiza kwenza. Ikhosi ye-MCSE inokubonga umhlaba wonke kwaye ibambelele kakhulu kwiimeko eziqhubekayo zomsebenzi.
Iziqinisekiso ze-10 ze-Microsoft ezifunekayo namhlanje kwi-2018
Iziqinisekiso eziphezulu ze-10 ze-Cloud kwi-2018